Zvekuita kana yangu bhatani repamba iPhone risingashande | IPhone nhau
Zvekuita kana yangu bhatani repamba iPhone risingashande
Bhatani repamba reiyo iPhone ndicho chinhu icho chatinoda nekuvenga muzvikamu zvakaenzana. Iyo inzvimbo yekushandisa ye iPhone, asi vazhinji vedu tinozviona zvakashinga kuti tiinyure zvachose kuti iite kuti ishande, uye zvakatonyanya kudaro kana isu takagunzva ID, sezvo iri tactile. Zvakare, kubva mukushandisa zvakanyanya, zvakajairika kuti bhatani repamba rimire kushanda.
Iyo iPhone 5 yakauya neyakavandudzwa bhatani repamba, iro rinofanirwa kugadzirisa dambudziko, asi, pamusoro pezvose, mhando dzekare dzichiri kubatwa nehutachiona. Zvakare, kana isu tiine matambudziko pane iyo iPhone iyo isingafungidzirwe, nguva dzose isu tinogona kuyedza kuzvigadzirisa neimwe yenzira nhatu dzatinokurudzira pazasi.
Chokutanga pane zvose, tinofanira kufunga kana iPhone yedu iri pasi garandi. Zvine musoro, kana mudziyo wedu usati watengwa kwegore zvakadaro, zano rakanakisa nderekutora kuApple Store woigadzira (kana kutsiva, kana vakasarudza kudaro). Ichi chinyorwa chakanangidzirwa kune avo vanobatanidza kukanganisa mubhatani repamba re iPhone yavo kuitira kuti ive nechokwadi.
1 Maitiro 1: Calibrate iyo (uye pamwe itangezve)
2 Maitiro echipiri: Chenesa
3 Maitiro 3: Activate AssistiveTouch
Maitiro 1: Calibrate iyo (uye pamwe itangezve)
Chinhu chakanakisa chinogona kuitika kwauri ndechekuti bhatani repamba risingapindure rine kutadza kwesoftware. Kana zvirizvo, dambudziko richagadziriswa nekudzokorora bhatani. Kuti tizvigadzirise tichaita zvinotevera:
Isu tinovhura Apple application izvo zvakauya nekutadza, seyachi wachi.
Tinodzvanya nekubata bhatani rekurara kusvikira iyo yekudzima Slider yaonekwa.
Kana Slider yaonekwa, isu tinosunungura yekurara bhatani uye tinya yekumba bhatani kwema5-10s. Iko kunyorera kuchavharwa.
Kana dambudziko rakagadziriswa, wave nerombo rakanaka. Kana zvisiri, danho rinotevera kudzorera iyo iPhone.
Maitiro echipiri: Chenesa
Chidiki cheCoke, maoko anodikitira, tsvina muhomwe yako kana muhomwe… Izvi zvinhu hazvigone kukanganisa bhatani repamba. Kana nzira yekutanga isina kushanda, isu tichafanirwa bhatani rekutanga rakachena. Kune izvi tichada 98-99% isopropyl alcohol, chigadzirwa chatinogona kuwana muzvitoro zvehardware. Tichaita zvinotevera:
Isu tinoisa 2 kana 3 inodonhedza yakananga pane bhatani (isu tinodzivirira iyo skrini).
Nechinhu chakachengetedzwa (senge penzura ine eraser) tinoramba tichimanikidza kuti doro ripinde mufreyimu.
Isu tinosuka bhatani.
Tinomirira 10-15m usati watarisa kana zvaishanda.
Maitiro 3: Activate AssistiveTouch
Kana nzira mbiri dzapfuura hadzina kushanda, zvinogona kuti isu tine bhatani rakafa zvachose. Kana zvirizvo, mabhatani mabhatani anogona kusarongeka uye kugadzirisa kwehunyanzvi kunenge kuri madikanwa. Chinhu chakanaka ndechekuti muIOS pane chairo bhatani pachiratidziri. Kuti tishandise tichaenda ku Zvirongwa / Zvakajairika / Kuwanika / AnobatsiraTouch uye isu takagadzirisa switch. Bhatani rinoyerera richaonekwa pachiratidziro chinoshanda zvakafanana nebhatani repamba uye rine zvimwe zvishoma sarudzo Tinogona kuifambisa kwatinoda nekuchengeta munwe wedu pairi uye nekuiendesa kunzvimbo inodiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Zvekuita kana yangu bhatani repamba iPhone risingashande
Imwe mhinduro ndeye kushandisa compressor yemhepo kana kunyangwe iyo inobva kuchiteshi chegasi, iwe unodzvanya bhatani uye kuridza panguva imwe chete, nenzira iyi unobvisa tsvina yemukati. Yakatondishandira kakati wandei.
Pindura kuna SpecialK
SpecialK iyo yakaoma nzira, mweya wakamanikidzwa unogona kutokanganisa chimwe chinhu chemukati cheiyo iPhone ichiwedzera dambudziko. Muchokwadi, Apple inopa zano kuti usatombo shandisa mweya wakamanikidzwa pasi pechero mamiriro eiyo iPhone
David Lopez del Campo akadaro
ZVAKANAKA zviri nyore uye zvakapusa AREGLARLO
Pindura David Lopez del Campo
Sergio Aljorf akadaro
Pindura Sergio Aljorf
Eduard ArmiTex akadaro
Haisi spam) ingori imwe nzira.
Pindura Eduard ArmiTex
Ivan Ccerb akadaro
Chinja yako iPhone iri nyore !!
Pindura kuna Ivan Ccerb
Bhatani repamba re iPhone 4 marara, saka, iPhone 4 uye iPhone 4S uye zvese zvakanditadza zvakanyanya, kwete, yakawanda mushure memwedzi yakati wandei.
dambudziko nderekuti tinoshandisa bhatani repamba pane zvese, kunyangwe kubatidza iphone, ona nguva. apo pachokwadi zano ndere kushandisa bhatani rekumuka, asi kana takanganisa tinogona kushandisa «assistive touch» kana tinogona kudzikamisa bhatani nekuvhura iyo app nguva tobva tadzvanya bhatani rekubvisa, uyezve pachidzitiro chekuvhara tinodzvanya bhatani repamba kwemasekondi mashoma kusvikira yaenda yakananga kuscreen chekumba
Kevin neko akadaro
Pindura kuna Kevin Neko
Alexander lopez akadaro
Pindura kuna Alejandro Lopez
Imwe nzira, yeavo vane Jailbreak pane avo zvishandiso: Tsiva nechimwe chiratidzo uchimanikidza bhatani reKumba uchishandisa Activator
Ndinogona here kushandisa isopropyl doro kana iri iPhone 6? Ndokunge, nekubata muverengi? Inobata chimwe chinhu here? Kutenda mberi!
Iyi inogona kuve iyo iPhone 6c kana yakavhurwa munaGunyana